Ampandehano ireo fikafika Google Chrome ireo amin'ny telefaona Android | Androidsis
Ampandehano ireo finday Google Chrome ireo amin'ny findainao Android
daniplay | | Fampiharana Android, Android cheat
Google Chrome dia mahazo vahana eo amin'ny sehatra Android rehefa mandeha ny fotoana noho ny fahaizany manome azy raha oharina amin'ireo mpitety tranonkala hafa. Ny fanaingoana tsara dia mahatonga anao hijanona eo alohan'ny hafa, ny fiarovana dia iray amin'ireo tanjaka ary azonao atao aza ny mahazo bebe kokoa amin'izany noho ny eritreretinao.
Misy tetika maromaro hamadihana azy io ho mihoatra ny iray amin'ireo mpitety finday maro, satria misy olona mampiasa fomba hafa hafa toa ny Firefox na Opera. Misaotra an'ireo fikafika Google Chrome efatra amin'ny Android ireo hohatsarainao amin'ny sehatra hafa ny fampiharana.
1 Sakano ny fampidinana mandeha ho azy
2 Fomba tsotra hamonjy bateria, angona ary hanatsarana ny fahombiazan'ny Chrome
3 Safidio ny toerana anaovana rakitra ao amin'ny Chrome
4 Sakano ny doka manelingelina
Sakano ny fampidinana mandeha ho azy
Matetika io safidy io dia tsy mandeha amin'ny laoniny, na dia amin'ny tranga sasany aza indraindray, na zavatra iray na hafa dia lasa mavitrika eo amin'ny sehatry ny browser. Ny fanakanana ny fisintomana mandeha ho azy dia hamonjy antsika amin'ireo zavatra sintonina tsy misy alalana aminay.
Raha te-hiala ny fisintomana mandeha ho azy dia mankanesa any amin'ireo teboka telo mitsangana, Fikirana ary tsindrio izao ny fanovana tranokala. Mikaroha "Fampidinana mandeha ho azy" ary esory amin'ny "Ask before", hamonjy antsika amin'ny fisintomana ratsy sasany na amin'ny tranokala tsy azo antoka ity.
Fomba tsotra hamonjy bateria, angona ary hanatsarana ny fahombiazan'ny Chrome
Izy io dia iray amin'ireo fandaminana izay tsy voamarika satria miafina tokoa, ny maody fototra dia iray amin'ireo zavatra azonao andramana ary azo antoka fa notahirizinao foana io. Mampihena ny fihinanana data, ny bateria ary izay rehetra manampy fampandehanana tsara kokoa ny browser.
Mba hahatongavana amin'io safidy io miverena amin'ireo teboka telo mitsangana amin'ny app Google Chrome, Fikirana ary "Mode mode", ampandeha ny mitovy amin'izany mba hilalaovana. Ny maody fototra dia mahatonga ny zava-drehetra ho haingana kokoa amin'ny alàlan'ny famoretana sary, satria ny pejy sasany dia mampakatra sary mavesatra.
Safidio ny toerana anaovana rakitra ao amin'ny Chrome
Avy amin'ny fisintomana rakitra marobe ao amin'ny Google Chrome tsara kokoa ny misafidy tranokala handehanana handamina sary, antontan-taratasy, horonan-tsary ary audio ao anaty fampirimana amin'ny telefaonao. Amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny manana ny zava-drehetra eo an-tànana hatrany ary izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny toerana alehan'ny fampidinana browser.
Raha te hitondra ireo fisintomana amin'ny tranokala hafa dia mankanisa ireo teboka telo mitsangana, tadiavo ny Settings ary tadiavo izao ny kiheba fampidinana. Omeo faka vaovao izy mba hahafahana misintona avy amin'ny tranokala nofidinao, na hangataka aminao ilay tranokala isaky ny misintona ianao.
Sakano ny doka manelingelina
Matetika ny dokambarotra mpanararaotra dia manelingelina amin'ny tranokala sasanyNoho izany, tsara kokoa ny manakana azy ireo raha toa ka matetika izy ireo no manokatra pop-up na varavarankely hafa ao amin'ny browser. Ny tsara indrindra amin'ny tranga maro dia ny fanafoanana ireo doka fanararaotana, satria misy ireo pejy noho ny fanaovana doka.
Mba hanakanana azy ireo dia mandehana amin'ireo teboka telo mitsangana, Mandehana any amin'ny Settings, ao amin'ny tranokala tranokala izao mandeha amin'ny Ads. Rehefa tafiditra ao ianao, dia ampandehano ny safidy farany hanakanana ny doka efijery feno sy ireo noforonin'i Google Chrome isaky ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ampandehano ireo finday Google Chrome ireo amin'ny findainao Android
Toy izany no mijanona amin'ny laharana ao amin'ny PUBG Mobile miaraka amin'ny famerenana manomboka ny vanim-potoana tsirairay